WhyNotWin11: App hanamarinana raha mety amin'ny Windows 11 ny PC -ntsika Avy amin'ny Linux
Na mpampiasa isika na Rafitra miasa GNU / Linux miaraka amina solosaina iray na maromaro amin'ny fomba mailo Double Booting amin'ny Windows 7 na Windows 10, na satria manana fianakaviana, namana na mpanjifa miaraka aminay ihany izahay Windows, Tsara ny fahalalana izay rindranasa afaka manamora ny asan'ny fanamarinana ireo solosaina mety na tsia, ary nahoana no antony, satria mifindra monina amin'ny vaovao Windows 11.
Azo antoka, Microsoft Manana ny fitaovany maimaim-poana izy, fa ny tranony tsy dia tsara kokoa foana. Ary raha afaka mampiasa isika fitaovana maimaimpoana na malalaka ho an'ity sy ny asa hafa rehetra, amin'ny Windows, MacOS na GNU / Linux tsara kokoa aza. Ary izany indrindra no anton'ilay fangatahana antsoina "WhyNotWin11".
Araka ny efa fantatry ny mpankafy teknolojia maro, ny ankamaroan'ny fiheverana momba izany Windows 11 dia misy ifandraisany amin'ny natiora mandidy ny solosaina amin'ny Teknolojia TPM. Ho an'ity sy bebe kokoa, zava-dehibe ny fampiasana fampiharana izay manome antsipiriany bebe kokoa, toy ny "WhyNotWin11".
Noho izany, ho an'ireo izay maniry ny handalina bebe kokoa ny Teknolojia TPM avelanay eo ambany avy hatrany ianao, ny bokinay teo aloha mifandraika amin'ity lohahevitra ity sy ny hafa mifandraika amin'ny fanadihadihana ireo fampiharana mitovy amin'izany, an'ny loharano misokatra ho an'ny Windows:
"TPM (Trusted Platform Module) dia solosaina chip (microcontroller) izay afaka mitahiry soa aman-tsara ireo artifact ampiasaina hanamarinana ilay sehatra (PC na solosainao findainy). Ireo artifact ireo dia mety ahitana teny miafina, mari-pankasitrahana na fanalahidy enkripsi." TPM: kely ny zava-drehetra momba ny Modely Platform Matoky. Ary ny fampiasana azy amin'ny Linux!
1 WhyNotWin11: Open Source App
1.1 Inona ny antonyNotWin11?
1.3 Vaovao ilaina bebe kokoa
1.3.2 Fametrahana sy fampiasana
WhyNotWin11: Open Source App
Inona ny antonyNotWin11?
Raha ny filazan'ny Developer ao aminy Tranokala ofisialin'ny GitHub, "WhyNotWin11" Ity dia faritana fohifohy toy izao:
"Izy io dia script detection mba hanampiana hamantatra ny antony tsy fahavonanan'ny PC-nao amin'ny kinova Windows 11."
Izany no izy "WhyNotWin11" dia fitaovana rindrambaiko misokatra (application) misokatra ahafahantsika manamarina raha afaka mihazakazaka Windows 11 na tsia ny solosaina (desktop na laptop). Amin'ny fahasamihafana, amin'ny fanajana ny Fitaovana fizahana fahasalamana Microsoft (PC Health Check), izay manome fampahalalana marimarina kokoa momba ny antony mety handehanan'ny solosaina na tsia Windows 11.
Ary noho izany, dia manadihady ireo fitaovana ary milaza amintsika maninona no tsy tohanana ny Windows 11, manome anay ny lisitry ny fitaovan'ny rafitra rehetra izay misy olana.
Anisan'ireo mampiavaka indrindra ny "WhyNotWin11", izay manatsara azy noho ny Microsoft tany am-boalohany, azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
A Interface User Graphical (GUI) tsara kokoa.
Zahao ny fepetra takiana amin'ny mifanentana rehetra ary asehoy raha mahafeno azy ireo ny solosainao.
Asehoy loko ny valiny. Ny maha loko maitso an'ny "eny", ny loko mena an'ny "tsia", ary ny loko mavo ho an'ny "tsy azo antoka".
Fanamarinana ny fampifanarahana fitaovana amin'ny faritra rehetra, anisan'izany ny karazana CPU, ny kinova TPM, ny habetsaky ny RAM, ary ny BIOS, ankoatry ny entana hafa.
naoty: Rehefa manaraka ny ankamaroan'ny fitaovana miaraka amin'ny solosaina Windows 11, azo inoana fa mamela ny fametrahana azy mitovy aminy. Na izany aza, "WhyNotWin11" hanampy ny maro hanamboatra ireo antsipirian'ny fitaovana hita maso izay tsy tohanana izany.
Vaovao ilaina bebe kokoa
Ho fisintomana dia azonao atao ny miditra amin'ireto manaraka ireto rohy ary ampidino ny installer stable farany azo alaina ao Format ".exe". Handeha ho an'ny azy izy izao kinova miorina laharana 2.3.0.5, izay navoaka andro vitsy lasa izay.
Vantany vao alaina ny installer, ao amin'ny my tena fampiasana tranga, alefaso fotsiny ilay app ary andraso ny hamoahana azy mandra-panavaozana tanteraka ny sehatry ny interface-nao rehetra.
Ary izany no vokatry ny fampiasana "WhyNotWin11" amin'ny solosainako. Izay raha fintinina, azo inoana fa tsy mety hifindra monina Windows 11.
Na eo aza izany, amin'ny raharahako manokana dia tsy raharahako mihitsy, satria ny 99% amin'ny fotoanako amin'ny solosaina dia laniko tsara GNU / Linux, mampiasa sy mampivelatra ny ahy MX Linux 19 respin antsoina hoe FAHAGAGANA. Ary koa, ny solosaiko dia manana fampisehoana avo kokoa amin'ny lafiny rehetra GNU / Linux miaraka amin'ny Windows 10.
Ka: "Windows 11 aza miakanjo fa tsy handeha ianao".
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ity mahaliana ity fampiharana loharano misokatra antso «WhyNotWin11», izay mikendry manamora ny fanandramana fitaovana sy rindrambaiko ny solosaintsika hahafantarana raha mety na tsy azo apetraka Windows 11; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » WhyNotWin11: App hanamarinana raha mety amin'ny Windows 11 ny PC-nay
GitHub Copilot, mpanampy amin'ny faharanitan-tsaina amin'ny kaody fanoratana